No shortcut way to lose weight - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ခဏလေးနဲ့ ပိနျခငျြတာလား ha ha ပဲ ရမယျ
ဟာ ဒီ ဆရာမတော့ ရနျစပွီလို့ မထငျလိုကျပါနဲ့။ လှဲနတောလေးတှကေို စတေနာနဲ့ ပွောပွခငျြလို့ပါ။
ကိုယျတိုငျက မဝပမေယျ့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြး ဆှမြေိုးသားခငျြးတှထေဲမှာ ဝတဲ့သူတှရှေိတော့ ဝတဲ့သူတှရေဲ့ အခကျအခဲတှေ ခံစားခကျြတှကေို ခံစားနားလညျပေးလို့ရတယျ။
ဝတာဟာ မကောငျးပါဘူး။ ”ငါတို့ဟာငါတို့ စားနိုငျလို့ ဝတာ ဘာဖွဈလဲ” တို့ ”ဝလို့ လှလို့ ဆိုတာပဲ ရှိတယျ” တို့ လာမပွောပါနဲ့။ ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့တဈခုတညျးက ကွညျ့မယျဆိုရငျကို ဝတာဟာ မကောငျးပါဘူး။ အဝလှနျခွငျးဟာ အခွားရောဂါပေါငျးမြားစှာရဲ့ အစဖွဈတဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျကို ရှိသငျ့ရှိထိုကျတဲ့ အနအေထားမှာ ထိနျးသိမျးရပါမယျ။ ဒါမှ ကြှနျမတို့ သကျရှညျကနျြးမာစှာ နထေိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီလို ပွောလိုကျလို့ ဝတဲ့သူတှေ စိတျဓါတျကစြရာ၊ စိတျအားငယျစရာ မလိုပါဘူး။ ဝတာဟာ အပွဈတဈခုကြူးလှနျတာ မဟုတျဘူး၊ ခြို့ယှငျးခကျြ အားနညျးခကျြတဈခု မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျအလေးခြိနျ ထိနျးသိမျးဖို့ နောကျကတြယျဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ခန်ဓာကိုယျက သုံးစှဲဖို့ လိုအပျတာထကျ ပိုစားမိတဲ့အခါ ဝလာပါတယျ။ အလှယျပွောရရငျ အဝငျက အထှကျထကျ ပိုသှားတဲ့အခါ ဝလာပါတယျ။ အဝငျကတော့ အစားအစာ စားသုံးခွငျးက ရပါတယျ။ အထှကျအနနေဲ့ ခန်ဓာကိုယျအတှကျ မလုပျမဖွဈလုပျနရေတဲ့ လုပျငနျးဆောငျတာတှေ (ဥပမာ အသကျရှုခွငျး၊ နှလုံးခုနျခွငျး) နဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကနေ ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးပါတယျ။
ဝိတျ ဘယျလို ခမြလဲ?
အဝငျကို လြှော့မယျ သို့မဟုတျ အထှကျကို တိုးမယျ သို့မဟုတျ နှဈမြိုးလုံးနဲ့ ဝိတျခလြို့ ရပါတယျ။ အဝငျကို လြှော့ဖို့အတှကျ အစားလြှော့စားမယျ။ အထှကျကို တိုးဖို့အတှကျ ကိုယျလကျလှုပျရှားဖို့ မြားမြားလုပျမယျ။ ဒီနှဈမြိုးပဲ ရှိပါတယျ။ စဈမှနျတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ထိနျးသိမျးခွငျးကို အခြိုးကြ မှနျကနျစှာ စားသောကျခွငျးနဲ့ ကိုယျလကျလှုပျရှားမှုကပဲ ရနိုငျပါတယျ။ ပိနျဆေးတှေ အဆီကကြျောဖီတှကေ ဘာမှ မစှမျးဆောငျနိုငျပါဘူး။ ပိနျကောငျးပိနျသှားပါလိမျ့မယျ။ စဈမှနျတဲ့ ကနျြးမာတဲ့ ပိနျခွငျးမြိုး ဖွဈမှာ မဟုတျပါဘူး။
အစားအသောကျကို ဘယျလို လြှော့မလဲ?
အစားအသောကျကနေ ကယျလိုရီ အဝငျကို လြှော့ရမယျလို့ ဆိုလိုကျတာဟာ ညစာ မစားခိုငျးတာ မဟုတျပါဘူး၊ တဈနလေုံ့း သဈသီး/အသီးဖြျောရညျခညျြးပဲ သောကျခိုငျးတာ မဟုတျပါဘူး၊ တဈနကေုနျ ဟငျးရှကျပွုတျတှပေဲ စားရတာမြိုး မဟုတျပါဘူး၊ ထမငျးလုံးဝမစားတော့ဘဲ ကွကျဥတှခေညျြး နငျးကနျစားရတာမြိုး မဟုတျပါဘူး။ ဒါတှကေလဲ လူကို ပိနျကောငျးပိနျသှားစပေါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြိုးကတြဲ့ အာဟာရကို မရတဲ့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျက ရရှေညျမှာ မခံနိုငျပါဘူး။
ကယျလိုရီ အဝငျကို လြှော့ခတြဲ့အခါမှာ 500 နဲ့ 1000 ကီလိုကယျလိုရီကွားဟာ အန်တရာယျကငျးတဲ့ ပမာဏဖွဈပါတယျ။ တဈနကေို့ ခန်ဓ်ဓာကိုယျရဲ့ လိုအပျခကျြအောကျ 1000 ကီလိုကယျလိုရီထကျ ပိုပွီး လြှော့မစားသငျ့ပါဘူး။ တဈနကေို့ 1000 ကီလိုကယျလိုရီ လြှော့စားရငျ ယဘေုယအြားဖွငျ့ တဈပတျကို2ပေါငျခနျ့ ကပြါတယျ။ ဆိုလိုတာက တဈပတျကို2ပေါငျထကျ ပိုပွီး မခသြငျ့ပါဘူး။ ဒီ့ထကျပိုပွီး ခရြငျလဲ ဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈတာလဲဆိုတော့ ကနျြးမာရေးနဲ့ မညီညှတျတာတှေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။ ပငျပနျးတာ၊ ဖြားလှယျတာ၊ နှုံးပွီး မအီမသာဖွဈတာ၊ ရှငျရှငျလနျးလနျး တကျတကျကွှကွှ မရှိတာတှကေ စလို့ ရရှေညျမှာ ဆိုးကြိုးတှေ ဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
တဈပတျကို အမြားဆုံး2ပေါငျ၊ တဈလကို4ပေါငျနှုနျးနဲ့ ကိုယျနဲ့ သငျ့လြျောတဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို ရဖို့4လ၊5လ၊6လ၊ 1 နှဈ စသဖွငျ့ အခြိနျယူရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဝိတျကသြှားရငျလဲ မပွီးသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီ့အလေးခြိနျကို ဆကျထိနျးထားဖို့ကလဲ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဝိတျခတြာဟာ ရရှေညျစီမံကိနျး ဖွဈပါတယျ။ လကျတှကေ့ရြပါတယျ။ ကိုယျနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ နညျးစနဈတှကေို ကိုယျလုပျနိုငျတဲ့ အတိုငျးအတာ ဘောငျထဲကနေ ဖွညျးဖွညျးနဲ့ မှနျမှနျ လုပျသှားရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မဟုတျရငျ လြှော့စားနိုငျတဲ့အခါ လြှော့စားခငျြစိတျပေါကျတဲ့အခါ လြှော့စားလိုကျ၊ ပွီးရငျ မထူးပါဘူးကှာဆိုပွီး နဂိုအတိုငျး ပွနျစား၊ ပွနျနလေိုကျနဲ့ ဝိတျက ကလြိုကျ ပွနျတကျလာလိုကျ ပွနျခလြိုကျ ပွနျတကျလာပွနျလိုကျနဲ့ လုံးလညျခြာလညျလိုကျနပေါမယျ၊ သံသရာလညျနပေါမယျ။ အဲ့ဒါကို weight cycling လို့ ချေါပါတယျ။
ပိနျဆေးတှေ အဆီကကြျောဖီတှကေို အားမကိုးပါနဲ့။ ကောငျးကြိုးထကျ ဆိုးကြိုးက ပိုမြားပါတယျ။ သူမြားစီးပှားရေးကို ဖကျြလိုဖကျြဆီး လုပျတာ မဟုတျပါဘူး။ အာဟာရပညာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ ပွောသငျ့ပွောထိုကျတဲ့ စကားကို ပွောတာပါ။ ညစာ မစားဘဲ ကွိတျမှိတျနတောမြိုး မလုပျပါနဲ့။ တဈနလေုံ့း ဒုက်ခခံပွီး ဟငျးရှကျပွုတျတှပေဲ စားမနပေါနဲ့။ အသီးစားတာ ကောငျးပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ အသီးပဲ စားရုံနဲ့ အာဟာရ မလုံလောကျပါဘူး။ ကွကျဥတှေ အမြားကွီး စားတာမြိုးလဲ မလုပျပါနဲ့။ အသားဓါတျတှေ အမြားကွီး ပါတဲ့အတှကျ ကွာလာရငျ ကြောကျကပျကို ထိခိုကျစပေါတယျ။
ကိုယျ့ရဲ့ လှဲမှားနတေဲ့ စားသောကျပုံ နညျးစနဈတှေ၊ လူနမှေုပုံစံတှေ၊ အပွုအမူ၊ အတှေးအမွငျတှကေို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပွငျယူသှားပွီး အခြိနျယူပွီး ဝိတျခရြမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ခဏလေးနဲ့ ပိနျခငျြရငျတော့ ha ha ပဲ ရပါမယျ။ ဝိတျခတြယျဆိုတာ လှယျတော့ မလှယျဘူး၊ ကွိုးစားရပါတယျ၊ စိတျရှညျရပါတယျ။
ကိုကို မမ ဦးဦး ဒျေါဒျေါ မောငျလေး ညီမလေးတှေ အားလုံး မဝဘဲ လှနိုငျကွပါစေ။ မှနျကနျတဲ့ နညျးစနဈကတြဲ့ လကျတှဆေ့နျတဲ့ နညျးလမျးတှနေဲ့ ကိုယျအလေးခြိနျကို ကနျြးမာစှာ ထိနျးသိမျးနိုငျကွပါစလေို့ ဆန်ဒပွုပါတယျ။
ခဏလေးနဲ့ ပိန်ချင်တာလား ha ha ပဲ ရမယ်
ဟာ ဒီ ဆရာမတော့ ရန်စပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့။ လွဲနေတာလေးတွေကို စေတနာနဲ့ ပြောပြချင်လို့ပါ။
ကိုယ်တိုင်က မ၀ပေမယ့် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာ ၀တဲ့သူတွေရှိတော့ ၀တဲ့သူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ ခံစားချက်တွေကို ခံစားနားလည်ပေးလို့ရတယ်။
၀တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ”ငါတို့ဟာငါတို့ စားနိုင်လို့ ၀တာ ဘာဖြစ်လဲ” တို့ ”၀လို့ လှလို့ ဆိုတာပဲ ရှိတယ်” တို့ လာမပြောပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းက ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကို ၀တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ အ၀လွန်ခြင်းဟာ အခြားရောဂါပေါင်းများစွာရဲ့ အစဖြစ်တဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ အနေအထားမှာ ထိန်းသိမ်းရပါမယ်။ ဒါမှ ကျွန်မတို့ သက်ရှည်ကျန်းမာစွာ နေထိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို ပြောလိုက်လို့ ၀တဲ့သူတွေ စိတ်ဓါတ်ကျစရာ၊ စိတ်အားငယ်စရာ မလိုပါဘူး။ ၀တာဟာ အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်တာ မဟုတ်ဘူး၊ ချို့ယွင်းချက် အားနည်းချက်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းဖို့ နောက်ကျတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်က သုံးစွဲဖို့ လိုအပ်တာထက် ပိုစားမိတဲ့အခါ ၀လာပါတယ်။ အလွယ်ပြောရရင် အ၀င်က အထွက်ထက် ပိုသွားတဲ့အခါ ၀လာပါတယ်။ အ၀င်ကတော့ အစားအစာ စားသုံးခြင်းက ရပါတယ်။ အထွက်အနေနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မလုပ်မဖြစ်လုပ်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ (ဥပမာ အသက်ရှုခြင်း၊ နှလုံးခုန်ခြင်း) နဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကနေ ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းပါတယ်။
၀ိတ် ဘယ်လို ချမလဲ?
အ၀င်ကို လျှော့မယ် သို့မဟုတ် အထွက်ကို တိုးမယ် သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ ၀ိတ်ချလို့ ရပါတယ်။ အ၀င်ကို လျှော့ဖို့အတွက် အစားလျှော့စားမယ်။ အထွက်ကို တိုးဖို့အတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖို့ များများလုပ်မယ်။ ဒီနှစ်မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းခြင်းကို အချိုးကျ မှန်ကန်စွာ စားသောက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကပဲ ရနိုင်ပါတယ်။ ပိန်ဆေးတွေ အဆီကျကော်ဖီတွေက ဘာမှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ ပိန်ကောင်းပိန်သွားပါလိမ့်မယ်။ စစ်မှန်တဲ့ ကျန်းမာတဲ့ ပိန်ခြင်းမျိုး ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အစားအသောက်ကို ဘယ်လို လျှော့မလဲ?
အစားအသောက်ကနေ ကယ်လိုရီ အ၀င်ကို လျှော့ရမယ်လို့ ဆိုလိုက်တာဟာ ညစာ မစားခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်နေ့လုံး သစ်သီး/အသီးဖျော်ရည်ချည်းပဲ သောက်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ တစ်နေကုန် ဟင်းရွက်ပြုတ်တွေပဲ စားရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ထမင်းလုံးဝမစားတော့ဘဲ ကြက်ဥတွေချည်း နင်းကန်စားရတာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေကလဲ လူကို ပိန်ကောင်းပိန်သွားစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အချိုးကျတဲ့ အာဟာရကို မရတဲ့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်က ရေရှည်မှာ မခံနိုင်ပါဘူး။
ကယ်လိုရီ အ၀င်ကို လျှော့ချတဲ့အခါမှာ 500 နဲ့ 1000 ကီလိုကယ်လိုရီကြားဟာ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ခန္ဓ္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုအပ်ချက်အောက် 1000 ကီလိုကယ်လိုရီထက် ပိုပြီး လျှော့မစားသင့်ပါဘူး။ တစ်နေ့ကို 1000 ကီလိုကယ်လိုရီ လျှော့စားရင် ယေဘုယျအားဖြင့် တစ်ပတ်ကို2ပေါင်ခန့် ကျပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တစ်ပတ်ကို2ပေါင်ထက် ပိုပြီး မချသင့်ပါဘူး။ ဒီ့ထက်ပိုပြီး ချရင်လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပင်ပန်းတာ၊ ဖျားလွယ်တာ၊ နှုံးပြီး မအီမသာဖြစ်တာ၊ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း တက်တက်ကြွကြွ မရှိတာတွေက စလို့ ရေရှည်မှာ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို အများဆုံး2ပေါင်၊ တစ်လကို4ပေါင်နှုန်းနဲ့ ကိုယ်နဲ့ သင့်လျော်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရဖို့4လ၊5လ၊6လ၊ 1 နှစ် စသဖြင့် အချိန်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိတ်ကျသွားရင်လဲ မပြီးသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီ့အလေးချိန်ကို ဆက်ထိန်းထားဖို့ကလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၀ိတ်ချတာဟာ ရေရှည်စီမံကိန်း ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့ကျရပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ နည်းစနစ်တွေကို ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာ ဘောင်ထဲကနေ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ မှန်မှန် လုပ်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် လျှော့စားနိုင်တဲ့အခါ လျှော့စားချင်စိတ်ပေါက်တဲ့အခါ လျှော့စားလိုက်၊ ပြီးရင် မထူးပါဘူးကွာဆိုပြီး နဂိုအတိုင်း ပြန်စား၊ ပြန်နေလိုက်နဲ့ ၀ိတ်က ကျလိုက် ပြန်တက်လာလိုက် ပြန်ချလိုက် ပြန်တက်လာပြန်လိုက်နဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေပါမယ်၊ သံသရာလည်နေပါမယ်။ အဲ့ဒါကို weight cycling လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ပိန်ဆေးတွေ အဆီကျကော်ဖီတွေကို အားမကိုးပါနဲ့။ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးက ပိုများပါတယ်။ သူများစီးပွားရေးကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဟာရပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့ စကားကို ပြောတာပါ။ ညစာ မစားဘဲ ကြိတ်မှိတ်နေတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ တစ်နေ့လုံး ဒုက္ခခံပြီး ဟင်းရွက်ပြုတ်တွေပဲ စားမနေပါနဲ့။ အသီးစားတာ ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အသီးပဲ စားရုံနဲ့ အာဟာရ မလုံလောက်ပါဘူး။ ကြက်ဥတွေ အများကြီး စားတာမျိုးလဲ မလုပ်ပါနဲ့။ အသားဓါတ်တွေ အများကြီး ပါတဲ့အတွက် ကြာလာရင် ကျောက်ကပ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ လွဲမှားနေတဲ့ စားသောက်ပုံ နည်းစနစ်တွေ၊ လူနေမှုပုံစံတွေ၊ အပြုအမူ၊ အတွေးအမြင်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြင်ယူသွားပြီး အချိန်ယူပြီး ၀ိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခဏလေးနဲ့ ပိန်ချင်ရင်တော့ ha ha ပဲ ရပါမယ်။ ၀ိတ်ချတယ်ဆိုတာ လွယ်တော့ မလွယ်ဘူး၊ ကြိုးစားရပါတယ်၊ စိတ်ရှည်ရပါတယ်။
ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ် မောင်လေး ညီမလေးတွေ အားလုံး မ၀ဘဲ လှနိုင်ကြပါစေ။ မှန်ကန်တဲ့ နည်းစနစ်ကျတဲ့ လက်တွေ့ဆန်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ကျန်းမာစွာ ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။